राज्यबाट जनताले केही पाउँदैनन् ?
बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल -
केपी अ‍ोली, हाम्रा प्रधानमन्त्री । अकस्मात अस्पताल भर्ना भए र भोलिपल्ट ठम ठम परेर निस्केनन् मात्र, म ठिक छु भन्ने शैलीमा कलाकारझैं देखिए पनि ।
सत्य हो ओली ठिक छैनन् । उनी विरामी छन् । बिरामीलाई बिरामी भन्दा राजनीति हुन्न । उनको बिमारी निको हुनुपर्छ, उनी स्वस्थ हुनुपर्छ, शुभकामना ।
तर प्रश्न छ, सर्वोत्तम सुविधासहित हेमोडायलासिस गरेपछि मात्र उनी ठम ठम परेर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका हुन्, फेरि पनि उनको स्वास्थ्य ठिक भएको छ भन्न सकिन्न । हप्ताको दुईपल्ट उनी डायलासिस गराउनुपर्ने कुरा डाक्टरहरु बताउँछन् । देशका प्रधानमन्त्रीले रोग र उपचारबारे राम्रो ज्ञान पाएका छन् ।
यसकारण यो महत्वपूर्ण छ कि देशमा सबै ओलीजस्ता प्रधानमन्त्री छैनन् । सर्वसाधारण, सिमान्तकृत, गरीवहरु हरेक दिन उपचार गराइपाउँ भनेर रोइकराइ गरिरहेका छन् । पत्रपत्रिकामा गुहार लगाएको पनि देखिन्छ । बाँच्न पाउँ अथवा बचाइ पाउन गरेको यो चित्कारले ओलीको मन छुनुपर्छ, ओली देशका प्रधानमन्त्री, आमनागरिकको यो पीडा उनले नहरे कसले हेर्ने ? राज्यप्रमुखको दायित्व हो, नागरिकको हक, हित र तिनले पाउनैपर्ने सामान्य सुविधाहरुको प्रत्याभूति दिनु । ओली स्वस्थ होलान्, किनकि राज्य उनको हातमा छ । जसको हातमा केही पनि छैन, ती सार्वभौम जनतालाई पनि हेर्नुपर्छ र तिनको स्वास्थ्य र तिनीहरुमाथि पनि न्याय गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का रहनुपर्छ ।
अस्पतालमा गएर हेरे हुन्छ, उपचारमा श्रीसम्पत्ति गुमाएर नाङगेझार भएकाहरुको पीडा कस्तो छ ? सरकारले अति रोगहरुलाई दिने भनिएको उपचार सुविधामा कतिसम्मको राजनीति हुन्छ र आमनागरिक मरिसकेपछि पनि उपचारको रकम निकासा हुनसक्ने स्थिति छैन ।
एउटा समिति बनाएर असाध्य रोग लागेका र सरकारले निर्धारित गरेका रोगका उपचार खर्च तत्काल उपलव्ध गराउने प्रवन्ध गर्नु जरुरी छ । यो लोकतन्त्र हो, समाजवादी व्यवस हो भने समाजमा समानता कायम हुनुपर्छ । समानताको अर्थ र औचित्य नेकपाकाले भन्दा अरुले बढी बुझेको होला र ?
तर विभेदकारी नेकपा नै हो । हरेक क्षेत्रमा माफियाको घोडा बन्ने नेकपाका नेताहरु नै बढी छन् । जो जनताको सेवा गर्छु भन्छ, ऊ नै विभेदाकारी भएपछि आमनागरिकले आधारभूत आवश्यकको परिपूर्ति कसरी गर्न सक्छ र ? काण्डे सरकार प्रकाण्ड विभेदकारी ।